Iwo maturusi mashanu akanakisa atichawana muKali Linux | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi, yakanyanya chengetedzo uye yekupinda inoshanda sisitimu ndeyeKali Linux. Iyi inoshanda system ndiye akatsiva yakakurumbira Backtrack 5 uye parizvino iri kubudirira zvikuru kunyangwe paine dzimwe nzira dziripo.
Iyi inoshanda sisitimu inouya netani yezvishandiso zvekuchengetedzwa kwemakomputa, kupinda mukati, uye kubiridzira kwetsika (pasina zvinangwa zvakaipa). Nekudaro, kune zvekare vanhu vazhinji vanoishandisa ku "ita zvakaipa" uye ita mhosva dzemakomputa. Kubva ku linuxadictos isu hatisi ivo vane mhosva yekushandisa zvisirizvo zvaunogona kupa kune anoshanda masisitimu seaya, nekuti kwavo kwekutanga chinangwa hachisi chakaipa.
Nhasi ndanyora zvishanu zvishandiso zvakanaka izvo kugoverwa uku kunotiunzira, zvishandiso zvauriuye inokutendera kuti utarise kuchengetedzeka kwemaitiro ako uye chengetedza kuti vakachengeteka here kana kuti kwete.
Ichi chirongwa chiri chekare munyika yekuchengetedza komputa uye haigone kushayikwa muKali Linux. Chirongwa ichi ndiye anotarisira kuongorora mapakeji pane yako network, iyo iwe yaunogona kuvhura uye uone zvakadzama zvazvinoreva. Semuenzaniso, kana mumwe munhu apinda yavo yezita uye password pawebhusaiti (iyo isina kunyorwa), uchakwanisa kuona iro zita rekushandisa uye iro password nekuongorora pasuru yacho.
Zenmap ndiyo "nyore mode" vhezheni yeNmap, ndiko kuti, graphical interface iyo inokutendera iwe kushandisa Nmap pasina kupinda mirairo. Nmap Inogona kukubatsira iwe kuona iwo ane nzvimbo ine network, kutarisa kuti ndiani akabatanidzwa uye kuti mangani makomputa ari pane iyo network.
Ichi chishandiso chinotibatsira kuti tiwane zvakashata zvemukati pamapeji ewebhu, senge imwe Java script kodhi inoita chimwe chiito chakaipa(semuenzaniso chinja iyo etc / inomiririra kuita mishonga). Chirongwa ichi chinobvumidza bhuku remanheru scanner kana yekumashure scanner iyo inoita nguva dzese paunoshanyira mapeji ewebhu
Ichi chirongwa ndecheMetasploit kurwisa GUI, iyo inokutendera iwe kuti uite kurwisa uku nenzira yekuona uye inonzwisisika. With Anwendung ichi, tinogona kutarisa kuti makomputa edu ari panjodzi yekurohwa kana kwete. Pamusoro pekukwanisa kuuraya metasploit kurwisa tisingazive mirairo, isu tinogona zvakare kuongorora Nmap uye kunyangwe kuita zvechisimba kurwisa.
Iyo aircrack-ng suite inokutendera kuti utarise kusimba kweiyo kiyi yako yeWi-Fi, nekuti iyo inokutendera kuti uzvirwisane pachako zvese nechisimba uye ne duramazwi kurwisa (kwe wpa). Mune ino suite, Kune zvirongwa zvakaita se airmon-ng, aireplay, airodump kana aircrack, izvo zvine hukama kune mumwe nemumwe uye zvinoshanda pamwechete kutyora password. Chinhu chakashata ndechekuti haina kurwisa WPS protocol (pane izvo uchafanirwa kushandisa reaver).
Isu tinovimba kuti mushure mekuverenga iyo posvo, iwe watove nekuwedzera kujekesa chii chinonzi Kali Linux uye kugona kune ayo ese maturusi ane.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Kali Linux Zvishandiso
Kushandisa izwi iri harina kunyorwa zvakanaka.
Ini ndaizowedzerawo SET (Yemagariro Injini Yekushandisa)
Chishamiso chevashandisi vane ruzivo uye makambani, zvisinei, panogara paine mapenzi mana anozopedzisira aushandisira izvo zvaisingafanirwe kushandiswa.
Pindura kuna 321
umm zvakanaka kwazvo posvo ndinoifarira